Niger: kurwa kweuranium - zvinyorwa - Afrikhepri Fondation
Niger: Hondo yeUranium - Zvinyorwa
Uhapana kutsamira kwesimba kunotungamira kwese kupenga. MuFrance, iyo 29 March 2014 yebasa re "Earth Hour", iro rakanzi zita re "Operation Spider-man", harisi muranda wekare, kana kupamba kwemigodhi kusanganisira Niger kana kusvibiswa kwematunhu ose kana mararamiro evanhu vatinenge tichibhururuka zvakatiita kuti tive nekuziva uye tine hanya zvokuti tinogona kudzima mablister kweawa. Iawa gore zvakajeka pane imwe nguva ingadai isina kunyadzisa kana kufananidzira ... Zvakadaro.
"Tiri kuitei iye zvino pasina jisi? Wakaisa kupi Monopoly? "
Zuva iroro, pasi rose, vanhu vashomanana vanobva munyika vanounganidza upfumi hwemarudzi ose vachizvikudza vanobuda vachifara kubva mumakenduru uye vanoda kuti kunyemwerera kwechando uye maziso akakomba "zvinongotarisa kuchinja kwechimiro iri mberi ". Sezvineiwo muchiedza murombo: mamiriro shanduko anonyengetedzwa vavo kunokukura kuparadzwa, imwe kukuru vakaita pachavo, havana kuramba uye vachatsvaka vasina dambudziko iri kukanganwa mu chaizvo maminitsi makumi matanhatu. Kunyange zvazvo 1,3 vanhu vari munyika yose vacharamba vachirarama vasina magetsi sezvavanoita humwe humwe husiku hwegore.
Kushushikana uye kusinganzwisisiki, dai zvakanga zvisina kuoma. Kuvimba nesimba kunotungamirira muchokwadi kune upenzi hwose uye kazhinji kune dzimwe nyika, dzimwe tsika, dzimwe tsika.
Somuenzaniso, pakati pehupenzi huno, mu 1972, chii chichazopedzisira chava AREVA chainzi iyo COGEMA uye yakavhura minda yeArlit uranium muNiger. France yaifara nezvemichina uye teknolojia yakagadzirirwa purofiti munharaunda yemurenje yakafukidza nzvimbo yose yekuchamhembe kweNiger, nyika yevaTuaregs. COGEMA, inoshamwaridzana nevekudyidzana veEurope, yakagadzira makambani maviri emigodhi: SOMAIR uye COMINAK, iyo iyo French State yaive yakawanda muzhinji. Nyika yeNigeria yakanga yakasununguka kwemakore gumi chete uye zviri pachena kuti haina nzira yekuisa mari. Akabva agamuchira zvipo zvakapiwa neFrance State. Nhasi, Niger ichiri kugutsa chinenge hafu yeFrench inotengeswa kunze kwenyika.
Zvisinei, muvhareji weNigeria ndeye 25 euros pamwedzi uye kupfuura 90% yeNigeria haakwanisi kuwana magetsi. Mumakore e47 ekudzvinyirira, vanhu veNigeria havana kumbobvira vawana purogiramu kubva kune izvozvi zvinyorwa zve uranium. Pane zvakasiyana. Panzvimbo, sulfuric acid inoda kuve nekubatanidzwa kwemaawa akadai sekugara kwenguva refu uye kushandiswa kwemhepo inosvibisa guruva kana sludge kubva pane zvinyorwa zvinoparadzirwa ne AREVA. Sezvo dai izvozvo zvisingakwani, kwemakore makumi mashanu kuti tishumire, "nyika yedu" inoshandiswa uye inogadzirisa zvisingaverengeki zvisingadzokeri mvura dzematafura anoshandiswa nevanhu vekuTuareg.
Saka, sei, varume vakapanduka?
Sei vari kutora nhapwa uye kutyisidzira migodi?
Zvinogona sei kunzwika, kudzivirira nharaunda yavo uye ramangwana revana vavo pasina kuendesa kuenda kune vanoita zvekunyengera kana magandanga?
Ichi chinyorwa chechokwadi chisingawanzoitiki, chakanzi "Niger: Hondo yeUrianium" inobva ku2012 uye inotitora nguva imwe zvakare. Asi pamwe nenguva iyoyo zvichida, apa tinonyeverwa uye tinonzwisiswa nechiedza kwekanguva.
Niger: Hondo yeUranium - Green Alert
5 nyowani kubva pa16,49 €
1 yakashandiswa kubva € 35,74
Tenga 16,49 €
kubva munaGunyana 22, 2020 8:53 AM
Hupenyu hweChakavanzika hweMiti - Peter Wohlleben (Audio)
Mazano ekukudza bvudzi nekukurumidza
Mazano eChakavanzika - Daniel Sévigny